မီးစကျ, ဘငျစငျဓာတျဆီမီးစကျ, ဂဟေနှင့်အတူဘင်စင်ဓာတ်ဆ်ီမီးစက်, ဂဟေနှင့်အတူဘင်စင်ဓာတ်ဆီလျှပ်စစ်မီးစက်, လြှပျစဈမီးစကျ
- အသေးစားအလုပ်များအတွက် အသုံးပြုရန် လွယ်ကူစွာရွှေ့ပြောင်းနိုင်ပါသည်။
- အသေးစားအလုပ်များအတွက် အသုံးပြုရန် လွယ်ကူစွာရွှေ့ပြောင်းနိုင်ပါသည်။ ချိတ်ဆက်လုပ်ငန်းများအတွက် သင့်တော်သည်။ အီတလီမှ NSM မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်၏ ချိတ်ဆက်ဒိုင်နမိုနှင့်အတူ HONDA စက်ကို သုံးစွဲသည်။ ဘက်ထရီသေတ္တာမပါသည့်အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်မှုကိုအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်သည်။
1. PATCO130AC4KVA 1.5-3 mill ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။ ချိတ်အား 130A
2. PATCO180AC 5.5 KVA 1.5-4 mill ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။ ချိတ်အား 180A
3. PATCO200AC7KVA 1.5-4 mill ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။ ချိတ်အား 200A
ဒီဇယ်အင်ဂျင် FPT ကုန်ပို့လွှာရယူရန်
CASTROL လောင်စာဆီ ကုန်ပို့လွှာရယူရန်
ဘင်စင်ဓာတ်ဆီလျှပ်စစ်မီးစက် PATCO ကုန်ပို့လွှာရယူရန်
မြက်ရိတ်စက် PATCO နှင့် မက်ဖြတ်စက်4ဘီး PATCO ကုန်ပို့လွှာရယူရန်